नेपाली चलचित्र ‘बिन्दास लाइफ’की नायिका सपना लामिछानेले आफ्नो २८ औं जन्मदिन मनाएकी छिन् । सपना चारबर्ष अघि प्रदर्शन भएको चलचित्र‘बिन्दास लाइफ’की नायिकासँगै निर्मात्री पनि हुन् । त्यसपछि उनले अन्य चलचित्रमा काम गरेकी छैनन् । केहि म्युजीक भिडियोमा पनि देखिएकी छिन् ।
आज (आइतबार) आफ्नो जन्मदिन मनाएकी सपनालाई प्रेमी दिपेश बस्नेतले औंठी उपहार दिएका छन् । सपनाको सामाजिक सञ्जाल नियाल्ने हो भने प्रेमसँगका गतिविधि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । आफ्नो प्रेमको बिषयमा खासै बोल्न नचाहाने सपना पछिल्लो दुईबर्ष यता दिपेशसँग रिलेशनमा छिन् । दिपेश एक ब्यावसायी हुन् । जापानमै बसेर ब्यावसाय गर्ने दिपेश अहिले नेपालमै छन् । उनलै काठमाडौंको दरबार लाउञ्जमा सरप्राइज केक काटिदिएका थिए । साथै औंठी उपचार दिएका हुन् ।
सार्वजनिक तस्बिरमा दिपेशले सपनालाई औठी लगाइदिएका छन् । कतै सपना र दिपेशले जन्मदिनको अवसर पारेर इन्गेजमेन्ट गरेका त होइनन् ? भन्ने जिज्ञासा मेटाउन हामीले सपनालाई प्रश्न गरेका छौं, तपाईले प्रेम दिपेशसँग इन्गेजमेन्ट गर्नुभएको हो ? उनी भन्छिन्, ‘उहाँले जन्मदिनमा उपहार दिनुभएको हो, इन्गेजमेन्ट गरेका हैनौं ।’ नायिका सपनाले आफूहरु प्रेममा रहेको स्विकार्दै गर्दै बिहेबारे तत्काल मिति नतोकिएको भएपछि छिट्टै बिहे गर्ने तयारीमा रहेको आर्टिष्ट खबर डटकमलाई बताएकी छिन् । सपनाले आफ्नो हातमा प्रेमी दिपेशको नामको ट्याट् समेत हानेकी छिन् ।